Toriteny 23 febroary 2014 | FJKM Amboniloha
Toriteny 23 febroary 2014
« Manambara ny famonjena ny Tenin’Andriamanitra »
Tsy misy zavatra izay tsy hain’ny Andriamanitra atao.
Narary mafy, tratran’ny tazo ity rafozam-bavin’I Petera. Tsy nisy nampilaza anefa Jesoa tamin’izany aretin-dravehivavy izany fa dia tonga tany aminy. Raha vao tonga tany antranon’i Petera Jesoa ka nahita ilay rafozany narary, avy hatrany Izy dia nanendry ny tanàny ka dia sitrana ilay ramatoa.
1- Manana fahavononana handray ny rofintsika I Jesoa
Inona ny teny fototry ny hoe nanendry ny tanàny Izy? Izany hoe noraisiny ny tanàny. I Jesoa dia manana fahavononana handray ny rofintsika, hitondra ny aretintsika. Mety manontany tena isika hoe “feno aretina ve izany eny amin’i Jesoa?”. Raha ara-bakiteny dia eny ny valiny, satria nihatra amin’ny tenany mihitsy izany; raha ny heviny ara-panahy kosa dia efa teny fikasana hatrany am-piandohana izany. Hoy Izy ao amin’ny matio 11:28 “Mankanesa aty amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa Izaho no hanome anareo fitsaharana.” ; izany hoe raisiny an-tanàna izay mety olana, izay mampalemy antsika, ary izany rahateo no antony nidinany tety an-tany mba hamonjy antsika.
2- Batisa : Nodiovin’I Jesoa, tamin’ny rany ny fahotantsika
Inona moa ny fototry ny batisa? Efa niara-nalevina taminy daoholo ny fahotantsika, efa natsangana ho olom-baovao, (Romana 6:1-4). Mifanohitra tanteraka amin’izany anefa ny ataon’ny devoly satria mampaniry ny fahotana aza no ataony. Eo anatrehan’izany dia malahelo Jesoa ka izany no niaretany fijaliana. Manoloana izany ary, dia mila mangataka ny famelan-keloka mandrakariva isika satria ampahorian’ny devoly indraindray. Mitadiava an’I Jehovah dieny mbola hita izy hoy ny Isaia 55:6. Mila mibebaka mihitsy izany isika, mila ampiharina amin’ny fiainana ilay hoe fiainam-pibebahana. Azon’ilay rafozam-bavin’I Petera tsara mihitsy ny tsy nampandroso an’I Jesoa, nefa aza faly izy ka dia natolony ny tanàny, nanolotra ny tenany izy. Manao ahoana kosa ny fanoloran-tenanao ? Anjaranao no mamaly izany.
3- Ny tokony ataontsika dia ny matoky ny tenin’Andriamanitra.
Satria aza adino fa ny anon-dian’I Jesoa teto anie dia ny hamonjy e! (Isaia 53:4). Zava-poana avokoa izay ataontsika raha sanatria ka tsy avelan-tsika handray an-tanàna ny fiainantsika Jesoa.
Velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra ary tsy misy ahasakana izany. Tahaka ny ando izay midina avy any an-danitra, mampaniry, mampiroborobo ary mahavokatra ny teniny. Koa maneke ary ho raisiny an-tanàna ny fiainanao.
Dia ho amintsika rehetra anie izany teny izany.
Ny voninahitra dia ho an’Andriamanitra irery ihany.
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 24 février 2014
https://www.youtube.com/watch?v=nzDLSF3b3c8 Tontosa soa amantsara ny alahadin'ny...
Editorial, Toriteny, Vaovao ... , vaovao	Lire la suite